Madurai to Muvattupuzha One Way Taxi | Car Hire | One Way Cab
Book one way taxi from Madurai to Muvattupuzha
Madurai to Muvattupuzha one way taxi
One way taxi fare starts from Rs. 4109
Wondering how to book Madurai to Muvattupuzha one way taxi. Bookcab provides Madurai to Muvattupuzha one way car hire services at affordable rates. Cost for Madurai to Muvattupuzha one way car hire starts from INR 4109. Distance between Madurai to Muvattupuzha is 227 km. Travel duration to Muvattupuzha is close to 4 hours 50 mins. Hire a cab from Madurai to Muvattupuzha one way drop with Bookcab's reliable online cab booking services. Select from Bookcab's wide choice of cars including Mercedes Benz and BMW for your One way taxi from Madurai to Muvattupuzha.
For more options on Madurai to Muvattupuzha taxi, check our car rentals page.
Madurai to Muvattupuzha One Way Car Hire Charges